Cunnada xagaaga - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-free
Kumanaan carruur Oregon ah ayaa ka qaybqaata cuntada dugsiga inta lagu jiro sannad dugsiyeedka.
The Barnaamijka Adeegga Cunnada xagaaga (SFSP) waxay siisaa lacag ururadu si ay u sii wadaan inay cuntada siiyaan carruurta inta lagu jiro xagaaga marka dugsigu aanu shaqaynayn. Maalgelinta waxaa bixiya USDA.
Barnaamijyada cuntada xagaaga ee beesha waxay u furan yihiin qoysaska oo dhan mana waydiisanayaan wax waraaqo ah-carruurtu way soo geli karaan. Barnaamijyada cuntada waxaa lagu bixiyaa meelo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan dugsiyada, jardiinooyinka, xarumaha bulshada iyo ururada caqiidada ku salaysan. Kuwo badan ayaa bixiya waxqabadyo madadaalo leh oo ka caawiya carruurta inay firfircoonaadaan oo ay sii wadaan waxbarashada inta lagu jiro xagaaga marka dugsigu maqan yahay.
Ma rabtaa inaad hesho goob kuu dhow?
Barnaamijka Adeegga Cunnada Xagaaga (SFSP) waxaa laga heli karaa boqolaal bulshooyinka Oregon oo dhan, oo siinaya cuntooyin iyo cunto fudud oo bilaash ah dhammaan carruurta da'doodu tahay 1-18. Barnaamijyada cuntada xagaaga ee beesha waxay u furan yihiin dhammaan qoysaska iyada oo aan haysan wax waraaqo ah ama is-diiwaangelin - carruurtu way soo geli karaan. Sannadkan waxa Oregon ka jira in ka badan 800 oo goobood, oo uu heli karo ilmo kasta - looma baahna waraaqo ama saxeex loo baahan yahay!
Isticmaal khariidad raadinta cuntada xagaaga si aad u hesho goob kuu dhow.
Hel Cuntooyinka xagaaga
Waaxda Waxbarashada ee Oregon Barnaamijyada Nafaqeynta Carruurta (ODE CNP) waxay caawin karaan jaaliyadaha iyo barnaamijyada inay bilaabaan cuntada xagaaga. Booqo shabakadooda si aad macluumaad iyo tababar u hesho, oo la xidhiidh Dustin Melton, Khabiirka Barnaamijka Nafaqada Carruurta ee ODE CNP [emailka waa la ilaaliyay] ama 503-947-5901.
Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta sidoo kale waxay kaa caawin karaan ka jawaabista su'aalaha oo ay ku xidhaan barnaamijyada ilaha:
La xidhiidh Faadumo Jawaid, Maareeyaha Barnaamijka, Ka Hortagga Gaajada Carruurta, at [emailka waa la ilaaliyay] ama 503-595-5501 x307
Fiiri boggayaga bilowga iyo barnaamijka deeqda ballaarinta cuntada xagaaga
Ka dalbo maalgelinta annaga Sanduuqa Taageerada Cunnada xagaaga barnaamij
Kor u qaad Cunnooyinka xagaaga qalabka suuq-geynta iyo kheyraad badan
Wax badan ka baro Sanduuqa Taageerada Cunnada xagaaga
Taageerada Cuntooyinka xagaaga
Qoysas badan ayaan waligood maqlin barnaamijka Adeegga Cunnada xagaaga, ama ma oga inuu u furan yahay dhammaan carruurta iyo kurayda 1-18 jir. Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta waxay caawiyaan dadka xiisaynaya inay ku xidhaan Cunnada xagaaga.
Waxaad ka caawin kartaa waalidiinta iyo carruurta inay ogaadaan kheyraadkan muhiimka ah adigoo ku deeqaya shaqadayada.
Wacyigelinta iyo Caawinta Barnaamijka
Iyada oo loo marayo wacyigelinta cuntada xagaaga, waxaan la shaqeynaa Waaxda Waxbarashada Oregon iyo la-hawlgalayaasha kale si aan u aqoonsanno bulshooyinka ka maqan barnaamijyada cuntada xagaaga, caawinta barnaamijyada kor u qaadista iyo socodsiinta, iyo kordhinta wacyiga goobaha cuntada ee dadweynaha dhexdooda.
Waxaan diiwaangelineynaa oo aan wadaagnaa hababka ugu wanaagsan iyada oo loo marayo suuqgeyn kala duwan, wacyigelin iyo ilo caawimo farsamo, iyo Shirka Kahortagga Gaajada Carruurta ee sannadlaha ah iyo kooxaha shaqada cuntada xagaaga ee gobolka iyo deegaanka. Waxaan sidoo kale ku siin deeqo yaryar si ay gacan uga geystaan ​​ballaarinta gelitaanka barnaamijyada.
MARKII EREGA LA FAAFIYAY
fadlan hubi inaad ku darto macluumaadka soo socda
Xagaaga kasta, cunto caafimaad leh oo bilaash ah ayaa diyaar u ah dhammaan carruurta iyo kurayda 1-18 sano jir ah. Si aad u hesho goobta cuntada xagaaga ee kuugu dhow, booqo SummerFoodOregon.org, wac 2-1-1, ama qoraal "cunto" u dir 877-877.
Waxaan aqoonsanaa fursadaha horumarinta Barnaamijka Adeegga Cunnada Xagaaga anagoo la shaqaynayna bixiyayaasha halkan Oregon iyo la socodka dadaalada gobolada kale. Waxaan u doodeynaa hagaajintan iyada oo loo marayo siyaasadda gobolka iyo federaalka oo isbedela, sida Dib-u-oggolaanshaha Nafaqeynta Carruurta ee Federaalka.
Si aad wax badan uga ogaato sida aad u taageeri karto cuntooyinka xagaaga, kala xidhiidh Lizzie Martinez 503-595-5501 x300 ama [emailka waa la ilaaliyay].